नेपाल आज | यस्तो रहेछ फक्सवागन पोलो १.०
यस्तो रहेछ फक्सवागन पोलो १.०
काठमाडाैं । सन् १९३२ मा जर्मनबाट शुरु भएको फक्सवागनका उत्पादन आज विश्वभर नै पाउन सकिन्छ । पिपुल्स कार अर्थात जनताको गाडी अबधारणबाट विकसित फक्सवागन आज नेपाल जस्ता थुप्रै देशहरुमा उपलब्ध छन् । यसले नेपाली बजारमा भने सन् २०१० मा प्रवेश पाएको हो ।
हाल नेपाली बजारमा फक्सवागनका टिगन, विटल, भिन्टो, एमीओ, साइरोक्व पासाट् तथा टोर्गी जस्ता हाई पर्फमेन्सयुक्त कारहरु उपलब्ध छन् । यी कारहरु उच्च सीसी र हाई क्लासका भएकाले हाई क्लासका उपभोक्ताहरुकै लागि मात्र हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय फक्सवागनले मध्यम लेभलका उपभोक्ताहरुलाई लक्षित गर्दै कम सीसीका पोलो ब्राण्डका कारहरु भित्र्याएको छ । जसमा भर्खरै मात्र आएको पोलो १.० पोलो मध्यकै उत्कृष्ट मानिएको छ ।
ह्याजव्याक सेग्मेन्टमा उपलब्ध पोलो १.० एक हजार सीसीमा उपलब्ध छ । यसलाई बजारमा फक्सवागनको नेपालका लगि आधिकारिक वितरक पुजा इन्टरनेशनलले ‘नाडा अटोशो २०१८’ को समयमा भित्राएको हो । अहिले बजारमा यो कार तिब्र गतिमा विक्रिवितरण भइरहेको कम्पनीले बताएको छ । बजारको मागअनुरुप आफूहरुले कार उपलब्ध गराएर नभ्याइएको पुजा इन्टरनेशनलका बजार प्रवन्धक बिराज श्रेष्ठले बताएका छन् ।
के छ त पोलो १.० को विशेषता ?
कम्पनीले फक्सवागनको आफ्नो उच्च साखलाई जीवीतै राख्न पोलो १.० लाई पनि विशेष उत्पादनको रुपमा बजारमा उपलब्ध गराएको छ । यदि तपाईहरु पनि मध्यम रेन्जमा विशेष कारको खोजिमा हुनुहुन्छ भने पोलो १.० तपाईको रोजाईको सहि विकल्प हुन पनि सक्छ ।
एक हजार सिसी इन्जिन क्षमतामा उपलब्ध फक्सवागन पोलो १.० साच्चै मध्यम रेन्जमा उत्कृष्ट पावर पिकअपसहितको लग्जरियस कार मान्न सकिन्छ । किनकी यसमा प्रयोग गरिएको एक हजार सिसीको इन्जिनले अन्यको तुलनामा करिब १२ सय सिसी बराबरको पावर दिने कम्पनीको दावी छ । त्यसोत एक हजार सिसी इन्जिन क्षमताको पोलो १.० ले ६ हजार २ सय आरपिएसमा ७६ पिएसको उच्च पावर दिन्छ भने, ४ हजार ३ सय आरपिएसमा ९५ एनएम टर्क उत्सर्जन गर्छ । यहि रेन्जमा अन्य कारहरुले यत्तिको पर्फमेन्स दिन नसक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
पोलोमा उपलब्ध गराइएको सेफ्टिलगाएत अन्य थुप्रै युटिलिटी फिचर्सहरुले गर्दा कारलाई अझ अब्बल दर्जामा स्थापित गरेको छ । जुन कारमा उपलब्ध गराइएको क्रुज कन्ट्रोल सिष्टम, रेन सेन्सिङ वेपरस्, एयर कन्डिसन तथा क्लाईमेट अटोमेटिक कन्ट्रोलर, डुवल एयर व्यागसहित कारको च्याचिसको बीचमा रहेको ठाडो सुरक्षा बिम आदिले पोलो १.० लाई विशेष बनाएको छ । यसका साथै कम्पनीले पोलो १.० मा अरु थुप्रै फिचर्सहरु समेत समावेश गराएको छ ।
कीं कन्ट्रोल सिष्टम उपलब्ध छ । जसमा चाँबीबाटै गाडीको ढोका खोल्न तथा बन्द गर्न सकिन्छ भने झ्यालका सिसाहरु पनि खोल्न र बन्द गर्न सकिन्छ । कारमा तलमाथि गर्न मिल्ने आरामदायी बक्स सिट उपलब्ध छ । जुन लेदर र फाईबरको मुलायम मिश्रणमा बनाईको हो ।
- कारमा ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी उपलब्ध छ ।
- स्कृनटच सहितको इन्फोटेन्टमेन्ट सिष्टम
- गाडीमा बाहिरी वातावरण अनुकुल भित्री वातावरण राख्न एसी सहित फ्रिज बक्स उपलब्ध गराइएको छ ।
- कप होल्टरसहित ड्राईभर आम रेष्ट छ ।
- कारको स्टेरिङ पनि स्र्पोटि लुक्समा रहेको छ भने आवश्यकता अनुसार स्टेरिङलाई तलमाथि समेत गनै सकिन्छ ।
- लेन चेन्ज इन्डिकेटर अर्थात् कारलाई अधेरोमा मोड्नु पर्दा हेड लाईटले साथ नदिन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा गाडीमा साईट इन्डिकेटर लाईट उपलब्ध गराईएको छ ।
- कारमा बल्बको ठाउँमा युनिक टेललाईट राखिएको छ ।
- रियर पार्किङ सेन्सर सहितको क्यामेरा जडान गरिएको छ । यी लगाएत अन्य थुप्रै फिचर्सहरु समावेश गरिएका छन् ।
पोलो १.० को छुटाउनै नहुने पक्ष भनेको यसको बडी हो । यसमा प्रयोग गरिएको मेटल र मोटाईले कारलाई निकै मजबुद र किफायती बनाएको छ । सामान्य ठोकाइ र थिचाइले कारलाई कुनै असर पार्न सक्दैन । कारमा गरिएको पेन्टिङ पनि उत्तिकै गुणस्तरीय छ । पोलो १.० लाई ह्याजब्याक सेग्मेन्टमा उत्कृष्ट सेडान पर्फमेन्ससहितको अनुभव दिने कोसिस गरिएको छ । यसो भनिरहँदा कारको सुरक्षाको सवाल पनि उठ्छ ।
पोलो १.० कत्तिको सुरक्षित छ त ?
फक्सवागन पोलो १.० लाई विशेषरूपले सुरक्षित र भरपर्दो बनाईएको छ । किनकी कारको अग्रभागको बम्परलाई अन्यको तुलनामा अलिकमाथि उठाईका कारणा कुनै ठोक्काइबाट सिधै यात्रुलाई समस्यामा पार्दैन । अर्कोमा आउछ कारमा उपलब्ध गराइएको एयर व्याग । कम्पनीले पोलो १.० मा डुवल एयर व्याग उपलब्ध गराएको छ । यसका अलवा कारमा सिटबेल्ट त छँदैछ ।
कम्पनीले पोलोलाई अझ विशेष बनाउने उद्देश्यले कारको बीच भागमा सुरक्षित बिमको प्रयोग गरेको छ । जसले गाडी दुर्घटनामा परिहाले पनि कारलाई फोल्ड हुनबाट रोक्छ र यात्रुलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ ।
यसका साथै पोलो १.० मा एन्टिलक ब्रेकिङ सिष्टम(एबीएस) सहितको १९५/५५आर१६ को स्टिल कबर एलो ह्वील प्रयोग गरिएको छ । जसले अफ रोडमा समेत सहज ड्राईभमा साथ दिन्छ । अर्को पोलोको महत्वपूर्ण पाटो हो गाल्भनाइज्ड बडी । जुन एउटै फ्रेमबाट कार निर्माण गरिएको छ । जसले गाडीको मजबुतीलाई थप भरपर्दो बनाएको छ भने गाडी पुरानो हुँदा पनि कुनै लिकेज हुने सम्भावना रहँदैन ।
यी यावत फिचर्स तथा विशेषताहरुले पोलो १.० लाई उत्कृष्ट सावित गर्न सक्छ । त्यसमा पनि धेरैकाे बजेटमा पर्न सक्ने र माईलेजका कारण इन्ट्रि लेभलका कार पारखिहरुलाई पोलोप्रति थप आकर्षण बढ्न सक्छ । कम सिसीको गाडी हुँदा स्वतः कारको मूल्य पनि कम पर्न जान्छ र माईलेज पनि बढि पाईन्छ । पोलो १.० ले सरदर १८ किमी सम्मको माईलेज दिने कम्पनीले बताएको छ भने, सहरी क्षेत्रमा करिब ११–१२ किलाेमिटर प्रतिलिटरसम्म दिन सक्छ । हाल नेपाली बजारमा फक्वागन पोलो १.० को मूल्य २६ लाख ५० हजार देखि ३७ लाख सम्म पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो कारको बारेमा तपाईं अझ बढी जान, बुझ्न वा किन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं फक्सवागनको आधिकारिक शोरूमहरू तथा काठमाडौंस्थित थापाथली र पानीपोखरीमा रहेको शोरुममा जान सक्नुहुने छ। र उपत्यकाबाहिर रहनुभएकाहरूले पोखरा, विराटनगर, बुटवल, नारायनगढ, धनगढी, र बिर्तामोडमा रहेका फक्सवागनका शाखा डिलरमा सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । अझ यसबारे थप जानकारीका लिन चाहे कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट www.volkswagen.com.np मा भिजिट गर्न पनि सकिन्छ ।
रोयल इनफिल्ड क्लासिक–३५० सीसी नयाँ मोडल बजारमा